Install XanMod Kernel on Linux Mint 20.1/20.2/20.3 - LinuxCapable
Wụnye XanMod Kernel na Linux Mint 20.1/20.2/20.3
Saturday, January 22, 2022 Fraịdee, Nọvemba 19, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa XanMod
Wụnye XanMod Linux Kernel
Otu esi emelite XanMod Linux Kernel
Otu esi ewepu (wepu) XanMod Linux Kernel
XanMod bụ free, open-source general-purpose Linux Kernel alternative to the stock kernel with Linux Mint 20. Ọ na-egosipụta ntọala omenala na atụmatụ ọhụrụ ma wuo ya iji nye ahụmahụ desktọọpụ na-anabata ma dị mma, karịsịa maka ngwaike ọhụrụ. XanMod bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ ma na-anya isi Linux Kernels ọhụrụ, na-enwe ọtụtụ alaka ịhọrọ site na kwụsiri ike, nsọtụ, na mmepe.
Maka ozi ndị ọzọ na XanMod kernel tupu ịwụnye, gaa na peeji ozi njirimara XanMod kernel.
XanMod na-akwado naanị x86_64 processor ije.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi ebubata ebe nchekwa XanMod wee wụnye Linux Kernel kacha ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Linux Mint 20.xx gị.
Nkuzi a ga na-eji ọdụ ọdụ, yana maka ndị na-amaghị, enwere ike ịhụ nke a na menu ngwa ihe ngosi gị.
Ọrụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa XanMod. Enwere ike ime nke a ọtụtụ ụzọ, mana nkuzi ga-eji ọdụ njikwa ngwugwu dabara adaba iji mee ka ihe dị mfe.
Nke mbụ, bubata ebe nchekwa site na iji iwu a.
Nyochaa na ọ rụrụ ọrụ iwu site na iji iwu grep.
Site na ibubata ebe nchekwa ahụ nke ọma, ọrụ na-esote bụ ibubata igodo GPG site na iji iwu a.
Na-esote, melite ndepụta ebe nchekwa APT gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Ebe nchekwa a na-enwekarị ngwungwu ọhụrụ maka ndabere arụnyerelarị, dịka ị chọpụtala.
Tupu ịga n'ihu, gbaa ọsọ iwu nkwalite dabara adabad.
Site na ebe nchekwa XanMod arụnyere na nke dị ugbu a, ị nwere ike iwunye kernel Linux site na XanMod.
Dị ka e kwuru n mmalite nke nkuzi, enwere alaka atọ ịhọrọ site na. N'oge nkuzi, ụlọ anụ ahụ nwere ụdị 5.14, ọnụ ya nwere 5.15 kwụsiri ike, mmepe nwekwara ihe kachasị ọhụrụ na-adịghị akwụ ụgwọ na mmepe Linux Kernel 5.15 kernel.
Nkuzi a ga-agafe wụnye ihe atọ niile, mana a na-atụ aro ka ị nọgidesie ike na ihu, ejila mmepe ọ gwụla ma ịmara ihe ị na-eme.
Iji wụnye XanMod kwụsiri ike:
Iji tinye ihu XanMod:
Iji tinye mmepe XanMod:
Ihe atụ sitere na (ọnụ):
Ozugbo etinyere kernel Linux ahọpụtara, ị ga-achọgharị sistemu gị iji mechaa nrụnye.
Ozugbo ị laghachiri na sistemụ gị, nyochaa nrụnye ahụ.
N'oge nkuzi, ngalaba nsọ nwere Linux kernel 5.15.2.
Ma ọ bụ ị nwere ike iji iwu ụdị pusi.
Iji dowe kernel Linux nke ị rụnyere na XanMod ka ọ dị ugbu a, ị ga-emelite mmelite dabara adaba na iwu nkwalite ma ọ bụrụ na ị tinye XanMod site na iji APT, nke nkuzi ahụ gosipụtara.
Ka ịlele maka mmelite.
Ọ bụrụ nkwalite dị.
N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ nọ n'ụkwụ nwere ike kwalite ruo n'ọnụ site na iji iwu nrụnye. Ọ dị mma, agbanwela ugboro ugboro. Nke a nwere ike ịkpata nsogbu.
Iji wepu XanMod, jiri iwu a.
Iji wepu XanMod kwụsiri ike:
Iji wepu ihu XanMod:
Iji wepu mmepe XanMod:
Nke a ga-ewepụ kpamkpam akara XanMod ga-ekwe omume yana ịdabere na-ejighị ya.
Dị ka o kwesịrị, ị nwekwara ike wepụ ebe nchekwa ahụ.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iwepu ngwungwu XanMod na ihe ndị a.
Nke mbụ, ị ga-achọ iji aha aha Linux na ngwugwu nkụnye eji isi mee. Enwere ike ịchọta nke a site na iji iwu na-esonụ dpkg - ndepụta iwu.
Aha egosiri na mmepụta bụ ndị ị ga-ewepụ nke gụnyere XanMod Kernel.
Cheta iji dochie 5.15.3 na ụdị ebipụtara na iwu dpkg -list.
Ịdọ aka ná ntị, gbanye iwu na-esonụ ka ị hụ na ị nwere Linux Kernel dị adị.
Ka ịlele ma ọ bụ tinyegharịa Linux Mint 20 LTS HWE Kernel:
Ka ịlele ma ọ bụ tinyegharịa Mint Linux 20 LTS Generic Kernel:
Site na ndabara, ekwesịrị ịwụnye kernel ndabara.
Ihe atụ (HWE Kernel Rollback):
Ịlele ma ọ bụ ime nke a ga-eme ka sistemụ gị ghara ịmalite ma mee ka isi ọwụwa.
Ugbu a malitegharịa PC gị iji mechaa mwepụ nke XanMod.
Dị ka ihe nrụpụta dị n'elu gosipụtara, ị laghachiri na kernel Linux ndabara nke Linux Mint 20 bịara, si otú a wepụ XanMod na sistemụ gị nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye XanMod na Linux Mint 20.xx. Emebere XanMod maka ndị ọrụ desktọpụ nwere ngwaike kachasị ọhụrụ, mana enwere ike itinye nke a na desktọpụ Mint Linux ọ bụla akwadoro ugbu a. Agbanyeghị, a na-adụ ọdụ ka ịme nyocha tupu ịkwalite ya, ọ naghị atụ aro ka iji ya na sistemụ dị egwu ma ọ bụ ụdị mmepụta.
Otu n'ime njirimara kachasị mma nke iji XanMod bụ na mgbe Linux Kernel na-esote, a na-etinye ya na mmepe / ọnụ ngwa ngwa. N'ihi ya, ọ bara uru ile anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị banye na egwuregwu Linux.
Otu esi etinye XanMod kernel na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye XanMod kernel na Ubuntu 20.04
Wụnye XanMod Kernel na OS 6.0/6.1
Wụnye XanMod kernel na Pop!_OS 20.04
Wụnye XanMod Kernel na Fedora 35
Wụnye Liquorix Kernel na Linux Mint 20.0/20.1/20.2/20.3
Categories Mint Linux Tags Linux kernel, Mint 20 Mint Linux, XanMod kernel Mail igodo